Hiakatra 700 Ar ny saran-dalana | news2dago |
Hiakatra 700 Ar Ny Saran-Dalana
news2dago 17 Jolay, 2009 10:22 Ankapobeny Rohy maharitra Verindrohy (trackback) (0)
Maro ny olona mampiasa ny fiara fitateram-bahoaka ary iarahana mahalala fa tsy ho takatra velively izany hande "frais" 700 Ariary izany. Mimenomenona mantsy ireo mpandraharaha @ ity sehatra ity fa miakatra ny kojakoja ny fiara no sady miakatra ihany koa ny solika. 300 Ariary moa izany sarany izany ankehitriny kanefa maro ireo mbola tsy mahatakatra izany. Ny olona lavitra fodiana no tena hijaly @ izy ity satria tsy maintsy mande betax fa tsy manan-tsafidy tsinona.
Mandry andriran'antsy kosa ny tokatrano eto andrenivohitra noho ny afitsoky ny jiolahy mitam-piadina mahery vaika satria dia mitety faritra mihitsy ireto farany mandromba. Saika isan'andro no ahenona hoe vaky indray ny tranon'i anona atsy dia toy izany hatrany. Ny mpitandro filaminana moa dia tena efa tsy misy hasiny intsony eo @ vahoaka noho izy ireo nanao fihetsika tsy dia miandany aminy loatra tato ato izay. Tsy ireo jiolahy tokoa no henjehina fa ny olona tsy manana fitaovana no aripaka.
Mbola tena ao anatin'ny fiandrasana ny valim-panadinana CEPE moa ny mpianatra sy ny ray aman-dreny ankehitriny ary volaza fa anio no hivoaka ny vokatra. Tsy dia tomombana @ tokony izy moa ny fanadinana t@ ity taona ity noho ny lafiny politika tsy dia nilamina loatra ka semban-drahona ihany ireto mpianatra tsy afaka nianatra t@ tokony ho izy fa tapatapaka ny fianarana nandritra ny taom-pianarana. Na izany ary dia mirary soa ho an'ireto zandry sy zanaka manala fanadinana izahay na dia nataon'ny sasany sorona azy ireo. Ny zanak'ireo mpitondra tokoa mantsy dia tsy misy mianatra eto dago. Izany mantsy no atao oe fitiavan-tanidrazana